November 2010 - Knowledge is Free
USB Flash Drive ကို အသုံးပြုပြီး Windows Vista, Windows7တင်လိုသူများအတွက် ရာနှုန်းပြည့် လုပ်ဆောင် ချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ Memory Stick ဖြင့် Windows တင်ရန် bootable ပြုလုပ်ပုံမှာ နည်းစနစ်များစွာအနက်မှ ယခုလုပ်ဆောင်မှုမှာ အလွယ်ကူဆုံးဖြင့် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ပြီးစီးစေမည်ဖြစ်သည်။
(1) Memory Stick အနည်းဆုံး 4GHz ရှိရန် လိုအပ်ပါမည်။
(2) အသုံးပြုလိုသည့် Windows7(or) Windows Vista အခွေလည်း အဆင်သင့် ရှိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
(3) Memory Stick ကို ကွန်ပျူတာရှိ USB Port တွင် တပ်ဆင်လိုက်ပါ။
(4) ထို့နောက် Keyboard မှ Windows Key + R ကို တွဲနှိပ်လျှက် Run ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
(5) Run box ထဲတွင် cmd ဟု ရိုက်ထည့်၍ Enter key ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
(6) Command Prompt ထဲတွင် DISKPART ဟု ပထမဦးစွာ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(7) ထပ်မံပြီး LIST DISK ဟု ရိုက်ထည့်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ သင့် Memory Stick ရဲ့ Size အရွယ်အစားကိုတော့ ကြိုတင်၍ သတိပြုကြည့်ထားပါ။ Disk0မှာ 298 GB ဖြစ်ပြီး၊ Disk 1 မှာ 3836 MB ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အောက်ဖော်ပြပါပုံအရ ကျွန်ုပ်၏ Memory Stick Size မှာ Disk 1 ကို ကိုယ်စားပြုထားပါသည်။
အကယ်၍ သင့်မှာ Drive (၂)ခု ရှိခဲ့ပါက Disk2ဟု ရိုက်ထည့်ရပါမယ်။ မသေချာပါက Hard Disk တစ်ခုတည်း သာထားရှိသော စက်တွင်သာ ပြုလုပ်ပါစေလိုပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ရာ Drive Letter အညွှန်းမှားယွင်း ရိုက်ထည့် မိပါက Drive ရှိ Partition Table (MBR) ပျက်ဆီးကာ Drive Letter များ ပျောက်ဆုံးသွားတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သေချာစွာ ဂရုပြုစေလိုပါတယ်။ ကိုယ်တွေ့ပါပဲ။ :)
ထပ်မံပြီး အောက်ပါအတိုင်း ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။
(Format လုပ်ရန် အချိန်အနည်းငယ် စောင့်ဆိုင်းရပါမည်)
Command Prompt မှ မထွက်ပါနဲ့အုံး။ Minize လုပ်ထားလိုက်ပါ။ ထို့နောက် Windows7(သို့) Vista ခွေကို သင့် DVD Drive ထဲသို့ ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ သင့် Drive ရဲ့ Drive Letter ကို ကြိုတင်မှတ်သားထားပါ။ ယခု ဖော်ပြထားသည့် နမူနာ လုပ်ဆောင်ချက်အရ CD Drive ကို (D:) ဟု သတ်မှတ်ပြီး၊ USB Drive Letter ကိုတော့ (H:) လို့ သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုပါစို့။
ဒါကြောင့် Command Prompt ကို ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီး-
D: CD BOOT
ဟု ရိုက်ထည့်ပါ။ ( D: ဆိုသည်မှာ သင့်စက်ရှိ DVD Drive တပ်ဆင်ထားသော location ကို ညွှန်းပါသည်။)
ဟု ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအုံး။ ဒါဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်း message များကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက်
ဟု ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအုံး။ USB Drive အတွက် BOOTMGR ကို အဆင်ပြေစေမယ့် command ဖြစ်ပါတယ်။
(H: ဆိုသည်မှာ သင့်ရဲ့ Memory Stick ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။)
ဒါဆိုရင် Windows7 ခွေထဲက File အားလုံးကို Copy ကူးယူ၍ Memory Stick အတွင်းသို့ ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ သင့်အတွက် လွန်စွာအသုံးတည့်စေမယ့် USB Bootable, Windows7Version Stick လေးကို ပိုင်ဆိုင်သွားပြီ ပေါ့။ အဆင်ပြေကြပါစေဗျား။
Source of : http://www.intowindows.com/
Posted by kmo at 11:17 AM No comments:
USB Thumb Drive ၏ လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀)ခု
Hard Disk မှာ နေရာလွတ် နည်းပါးနေသူတွေအတွက် အလုပ်မှအိမ်၊ အိမ်မှကျောင်း၊ အချက်အလက် သင်ခန်းစာ၊ အလုပ်ဖိုင်တွေကို သယ်ဆောင်သွားလိုသူတွေအတွက်၊ စနစ်တစ်ခုလုံးကို လုံခြုံစိတ်ချမှုပြည့်ဝစွာ အလုပ်လုပ်လိုပြီး အစီအစဉ်တကျ ရှိလိုသူများအတွက် USB Thumb Drive ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်လေးများကို စုစည်းဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
1. USB Drive ကို icon အနေနဲ့ သုံးနိုင်ပါတယ်
တကယ်လို့ ကွန်ပျူတာမှာ USB Hub တစ်ခုကို ထားရှိသုံးစွဲမယ်ဆိုရင်၊ နောက်ပြီး USB အများကြီးနဲ့ Multiple USB port တွေ ထားရှိ သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် အမျိုးမျိုး အစားစားကွဲပြားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ USB ကို icon တွေအနေနဲ့ ဖော်ပြ ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖော်ပြပေးတဲ့ XP, Vista, Windows7တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ custom icon တွေကို အသုံးပြုပြီး folder တွေကို icon ပုံစံချိန်းတဲ့ ပုံစံမျိုးအဆင့်ပဲ လွယ်လွယ်ကူကူ ရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ (.ico) format ကို drive ထဲမှာ အရင် မောင်းထည့်ရပါမယ်။ အကယ်၍ web application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ convert icon ကို အသုံးပြုလည်း ရပါတယ်။ icon ကို အမျိုးအစားကွဲပြားစွာနဲ့ USB မှာ ရည်ညွှန်းဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ် USB က ဘာ file တွေ ပါဝင်တယ်ဆိုတာ အလွယ်တကူ သိရှိရမှာပါ။
2. Google ၏ OS ကို အိတ်ထဲ ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်
Google ၏ OS ဖြစ်တဲ့ Chrome OS ကို USB drive ထဲမှာ ထည့်သွင်းပြီး ကိုယ့်ကွန်ပျူတာရဲ့ ဒုတိယ OS အဖြစ် ထားရှိ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ အလွန်မြန်ဆန်ပြီး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် custom ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်း အဆင်အပြင်တွေကအစ ပါဝင်တဲ့ coding တွေကို သွားပြန်ပြီး ပြင်ဆင်ရေးသားနိုင်တဲ့ open source OS တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
3. Democra key ဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချစွာ အလုပ်လုပ်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်
တကယ်လို့ USB drive ကိုဖြစ်စေ၊ PC ကိုဖြစ်စေ သုံးစွဲရတာ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေး အချက်အလက်တွေနဲ့ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာဖိုင်တွေ မလုံခြုံဘူးလို့ ခံစားရရင် Democra Key ကို download ရယူ၍ windows platform တွေပေါ် မှာ အလုပ်လုပ်နိုင်သော web application တစ်ခုလို သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ပုံရိပ်တည်းဖြတ်တာတွေ၊ email ဖွင့်စစ်တာတွေ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေကို encrypt ပြုလုပ်တာတွေနဲ့ Internet ကို browse လုပ်တာတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လုံခြုံမှုအပြည့်အ၀ ရှိပါတယ်။
4. XBMC Media Center ကို ထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်
ကိုယ့် PC မှာ WMP player နဲ့ အခြား player များစွာရှိပေမယ့် XBMC live ကို ရယူပြီး drive ထဲကို ထည့်သွင်း ထားမယ်ဆိုရင် netbook မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ laptop မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် media file တွေကို အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုခံစား နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အလွယ်တကူနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို သင်ခန်းစာ ဖိုင်တွေအနေနဲ့ ကြည့်ရှုပြီး လိုက်လံလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
5. Windows System တစ်ခုလုံးကို save လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်
တကယ်လို့ Thumb drive ထဲမှာ Ubuntu စနစ်တစ်ခုလုံးကို ထည့်သွင်းထားမယ်ဆိုရင် windows ရဲ့စနစ်မှာ မှားယွင်းနေတဲ့အမှားတွေ၊ error တွေ အားလုံးကို ubuntu ကတစ်ဆင့် boot လုပ်ပြီး ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုရင်း ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အတွက် ပုန်းအောင်းနေတဲ့ ဖိုင်တွေ၊ ဖိုင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့ virus တွေကို အလွယ် တကူ ကြည့်ရှုသတ်ပစ်နိုင်ပြီး drive space ကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း analyze လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Partition လုပ်တာ တွေ၊ windows password တွေကို ပြန်ခေါ်တာနဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ file တွေကို ပြန်လည်ရှာဖွေတာတွေ ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ပုံ နည်းအသေးစိတ်ကို lifehacker.com မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
6. USB Drive ကနေတစ်ဆင့် Windows စနစ်တစ်ခုလုံးကို အမိန့်ပေး ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်
Windows ပြန်လည်စတင်ချိန်မှာ USB drive ကနေ log off လုပ်တာတွေ၊ shut down လုပ်တာတွေကို USB drive ရဲ့ click ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ အထဲထဲမှာ အမိန့်ပေး file တွေကို တန်းစီပြီး ထည့်သွင်းဖို့အတွက် coding တွေ လွယ်လင့်တကူ ရှိပါတယ်။
7. သယ်ဆောင်ရ လွယ်ကူသော Windows Suite တစ်ခုလုံးကို ထည့်သွင်းသွားနိုင်ပါတယ်
Portableapps.com မှာ ရွှေ့ပြောင်းသယ်ယူရလွယ်တဲ့ software ကလေးတွေ၊ ဥပမာ Photoshop, acrobat reader, firefox, gtalk စတဲ့ software ကလေးတွေကို download ရယူပြီး USB drive ထဲ ထည့်ထားမယ် ဆိုရင် windows အတွက် နေရာလွတ်တွေများစွာ ထွက်ပေါ်လာစေပါမယ်။ Memory အရမ်းစားတဲ့ software တွေ ဆိုလို့ရှိရင်လည်း memory အစား သက်သာသွားပါမယ်။ ဒါ့အပြင် ရုံးက ကွန်ပျူတာမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ software မရှိလို့ အိမ်ပြန်အလုပ်လုပ်လို့ မရတဲ့သူတွေအတွက်လည်း အချိန်ကုန်သက်သာ သွားစေပါတယ်။ Portable software တွေဟာ software ကြီးတွေက လွဲလို့ function အစုံအလင် ပါရှိပြီး ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
8. USB Drive ထဲမှာ အရေးကြီး Data တွေကို ထားရှိနိုင်ပါတယ်
တစ်ချို့ မိသားစုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖိုင်တွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ အကြံအစည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ idea စိတ်ကူး တွေကို USB drive ထဲကို ထည့်သွင်းထားပြီး အဲဒီ USB ကို USB safeguard သုံးစွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် USB ကို လက်လွတ်စပယ် ထားခဲ့မယ်ဆိုတာတောင်မှ ကိုယ့်ဖိုင်ကို ၀င်ကြည့်တဲ့အခါမှာ password တောင်းတာမျိုးတွေ၊ ဖိုင်ကို ၀ှက်ထားတာမျိုးတွေ၊ ဖိုင်ပုံစံ ဖျောက်ထားတာမျိုးတွေ လုပ်ထားနိုင်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။
9. လိုချင်တဲ့အချိန်တွေမှာ ဖိုင်တွေကို ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပါတယ်
USB drive နဲ့ hard drive ကြားထဲမှာ ဖိုင်တွေကို ရွှေ့ပြောင်းတာ အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ USB ရဲ့ နည်းပညာ မြင့်မားရင် မြင့်မားသလို ရွှေ့ပြောင်းရ လွယ်ကူပြီး မြန်ဆန်ပါတယ်။ တကယ်လို့ internet မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖိုင်တင်တဲ့ upload sharing site ဖြစ်ပြီး application မှာ ထုတ်ပေးထားတဲ့ drop box နဲ့ဆိုရင် USB ထဲက ဖိုင် တွေကို အဲဒီထဲထည့်တာတွေ၊ Online ပေါ်မှာ ကြည့်ရှုနေတဲ့အချိန်မှာ ရုံးကနေတစ်ဆင့် drop box ထဲ ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းထားပြီး အိမ်ကနေတစ်ဆင့် အလွယ်တကူ ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
10. Linux OS ကို USB Drive ထဲ ထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်
Linux အနွယ်ဝင် OS တွေဟာ virus အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေပြီး သုံးစွဲရ လွယ်ကူတဲ့အပြင် အခုဆိုရင် ရွှေ့ပြောင်း သယ်ဆောင်ရ လွယ်ကူတဲ့ Portable Linux OS တွေပါ ထွက်ရှိလာတဲ့အတွက် drive ထဲကို ထည့်သွင်းထားပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ- ဥပမာ ရုံးမှာ virus တွေ အလွန်ကိုက်နေတဲ့အတွက် ရုံးက virus တွေ အိမ်က ကွန်ပျူတာကို ပါလာမှာ စိုးရိမ်နေသူများအတွက် အလွန် အသုံးဝင်ပြီး ရုံးမှအိမ်၊ အိမ်မှရုံး USB drive မှတစ်ဆင့် လွယ်ကူစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source: NetGuide_6November 2010
Posted by kmo at 12:54 PM No comments:
How to easy recovery from lost partition?
Partition တစ်ခုကို Fdisk, DISKPART, Partition Magic အသုံးပြုစဉ် မတော်တဆ ဖျက်လိုက်မိပါက hard disk အတွင်းရှိ အရေးကြီး data များအား ဆုံးရှုံးမှု ကြုံတွေ့စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပျက်ဆီးသွားသော partition table အတွင်း ရှိ အရေးကြီးအချက်အလက်များအား ပြန်လည်၍ ဆယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် Active@ Partition Recovery ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ထို့နည်းတူ Free ပေးထားပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသော Partition Recovery တစ်ခုဖြစ်သည့် EASEUS ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးသွားသော Partition အတွင်းရှိ data များနှင့် unallocated နေရာများပါမကျန် ပြန်လည်ဆယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Posted by kmo at 11:45 AM No comments:
IE 8 Crash ဖြစ်ခြင်းအား ဖြေရှင်းနည်း
အချို့ Page တွေထဲကို ၀င်တဲ့အခါမှာ Internet Explorer 8 က ချက်ချင်း crash ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ Browser crashes တွေကို PC ရဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ OS တွေ စတာတွေပေါ်မူတည်ပြီး ဖြေရှင်းလို့ ရပါတယ်။ ဒါက အခြား browser မှာ မဖြစ်ဘူး၊ ရေတိုပြဿနာဆိုရင်တော့ အခြား browser တစ်ခုခုကို ပြောင်း သုံးပါ။ ပြဿနာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အချက် ၂ ချက်က ပျက်နေတဲ့ add-on တစ်ခုခု၊ ဒါမှမဟုတ် Flash plug-in တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Adobe က ရရှိနိုင်တဲ့ uninstall utility ကိုသုံးပြီး Flash player plug-in နဲ့ Active X Component ကို uninstall လုပ်ပါ။ ပြီးသွားရင်တော့ PC ကို reboot ပြန်လုပ်ရပါမယ်။ နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ IE ကို ပိတ်ပြီး Default setting တွေအတိုင်း restart ချလိုက်ပါ။ ဒါက ပြဿနာရှိတဲ့ add-on တွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ Windows7နဲ့ Vista သုံးသူတွေအတွက်ကတော့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။
(1) Start ကို click နှိပ်ပြီး Internet Options လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
(2) Advance Tab ကို နှိပ်ပါ။ Reset button ကို နှိပ်ပါ။ ''Delete Personal Setting" ဆိုတာကို အမှန် မခြစ်ပါနဲ့။ ပြီးရင် reset ကို click လုပ်ပါ။
(3) IE ကို Restart လုပ်ပြီးသွားရင် Adobe's Flash Player Page ထဲဝင်ပြီး Flash Player install လုပ်ရမယ့် နည်းတွေအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။
ကဲ အခု ကိုယ် crash ဖြစ်ခဲ့တဲ့ site တွေကို ပြန်ဝင်ကြည့်ပါ။ Crash ဖြစ်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ပြဿနာ ရှိသေး ရင်တော့ ကိုယ်အသုံးပြုထားတဲ့ add-on တွေအားလုံး reinstall ပြန်လုပ်ပြီး ပြဿနာရှိသေးလားဆိုတာ တစ်ဆင့်စီ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
Posted by kmo at 11:28 AM No comments:
Faronics DFS 6.62.20.3058
DeepFreeze ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် version 6.62.20.3058 ကို အသုံးပြုနည်း manual နဲ့တွဲဖက်ပြီး ပြန်လည်၍ share လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေကြပါစေဗျား...